ပဲလှော်ကြားကဆား – medical doctors in Burma | MoeMaKa Burmese News & Media
သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၂
“–အဲဒီဆရာဝန်လေးတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်ကတော့ ကုသရေးစွမ်းရည်မဟုတ်ပါဘူး။ အမိန့်နာခံမှု၊ ရိုကျိုးသွက်လက်မှု၊ လူနာနဲ့ သူ့အထူးကုဆရာဝန်အကြားမှာ နှုတ်စောင့်စည်းမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဦးနှောက်ထည့်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဦးနှောက်က သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံဆရာဝန်ဆီမှာပဲ ထားပါတယ်–“
ဖြစ်ပြီးသွားလို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်တော့တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရင် ဆောက်တည်ရာရဖို့ကို ပထမဦးစားပေးရလိမ့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းအဖို့ ကိုယ့်မိဘအနိစ္စရောက်သွားတဲ့ နေ့ရက်လောက် ကိုးကွယ်ဆောက်တည်ရာ ပြိုလဲသွားတဲ့နေ့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲသည်သောက၊ ပရိဒေ၀၊ ဥပသာယတွေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် တရားနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော် မလွယ်တဲ့အလုပ်ပါ။ ဒီအလုပ်တွေကို မလုပ်ပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်မှာ ဒေါသအဖြစ်နဲ့ ဖောက်ခွဲထုတ်ပစ်လိုက်မိတာမျိုးဆိုရင် အမှားပါတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းမစာလို့ ဒီစကားမျိုး ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာလွန်းလို့ ပြောရတာပါ။ မိမိခံစားရတဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမှာ သူတပါးရဲ့ အမှောင့်ပယောဂ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါနေတယ်ဆိုတာ မှန်ချင်မှန်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ခဏကလေး မေ့ထားလိုက်ပါ။ သူ့ကိုလှည့်ဂရုစိုက်ဖို့ထက် ကိုယ့်ဒုက္ခကို ကုစားဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ကြာလို့ မေ့သွားမှာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဲဒါ ကိုယ့်အတွက် သေရာပါမယ့် ဒဏ်ရာပါ။ တဘက်လူကို ချက်ချင်း မတုန့်ပြန်တာဟာ ကိုယ့်ဘက်က အခြေမခိုင်မှာစိုးလို့ပါ။ ခေါင်းအေးသွားတဲ့အခါ ပြန်ရင်ဆိုင်မယ်။ လောလောဆယ် ကိုယ့်အတွင်းထဲမှာ လောင်မြိုက်နေတဲ့မီးကို အရင်သတ်နှင့်ဦး။
ဘေးလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သည်အဖြစ်အပျက်ကို အကြမ်းဖျင်း ကြားလိုက်တာနဲ့ ဘာတွေဖြစ်သွားသလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလိုက်မိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမျိုးမှာ မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ လောင်မြိုက်နေတဲ့အထဲမှာ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေလည်း ပါနေတဲ့အတွက်ပါ။ သူ့ခမျာ အခုအဖြစ်မှာ တခါတစ်နာလိုက်ရပြီ။ ရှေ့ဆက်တိုးလို့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် နစ်နာစရာရှိလာရင် သူများက တစ်ခါရယ်။ ကိုယ့်လူမှာက နှစ်ခါနာရမှာပါ။
မိသားစုထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အရေးအကြောင်းပေါ်လာပြီဆိုခဲ့ရင် ဆေးရုံကိုပို့ရမှာလား အပြင်ဆေးခန်းကိုပဲ တန်းခေါ်သွားရမှာလားဆိုတာ ပိုက်ဆံငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်သာ ကံကောင်းထောက်မစွာ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ အဲဒီပြဿနာမျိုးကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလို့တောင် မမြင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင် ရွဲ့ပြောသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာပြည်သူအများစုဟာ အဲလို အထူးကုဆေးခန်းကြီးတွေမှာ ခေါင်းခေါက်ပြီးကုနိုင်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိမှာပါလိမ့်။ ကိုယ်ကတောကြိုအုံကြားမှာ ခြောက်နှစ် ခုနှစ်နှစ်လောက်လွင့်နေရတဲ့ သူတောင်းစားသာသာ ဆရာဝန်အဆင့်မို့ထင်ပါရဲ့။ မြင်တောင် မမြင်ဖူးတော့သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ သူများကို မပြောပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ့မယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ့်မှာ ကင်ဆာရောဂါလို ခွဲစိတ်ကုသမှ ပျောက်မယ့် ဝေဒနာတစ်ခုခု ရှိနေပြီဆိုပါစို့။ မြောက်ဥက္ကလာမှာဖွင့်တဲ့ အထူးကုဆေးခန်းတောင် မကပ်နိုင်ဘူးဗျ။ အလကားနေရင်း ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်ဖြေပြီး ကြွားနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လစာငွေ တစ်သိန်းငါးသောင်းရတဲ့ အစိုးရအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကို မြန်မာ့လူမှုစီးပွားအဆင့်မှာ ဘယ်နားက ထားချင်ပါသလဲ။ အောက်တန်းစားလောက်မှာပဲ ရှိနေဦးမလား မသိပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် ကိုယ့်ထက်အများကြီး အောက်တန်းနောက်တန်းကျနေတဲ့ မြန်မာတွေ ဘယ်လောက်များနေမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ပါဦး။ အစိုးရဆေးရုံမှာတောင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ဆေးတွေကို ကိုယ့်ဘာသာ ၀ယ်ယူကုသနိုင်တဲ့လူနာအရေအတွက်နဲ့ သူ့မှာပါတဲ့ ပိုက်ဆံကလေးနဲ့ လောက်လောက်ငှငှ သက်သာသွားအောင် ကုပေးရတဲ့ လူနာအရေအတွက် ဘယ်ဟာက များလိမ့်မလဲဆိုတာ ရန်ကုန်က အထူးကုဆေးခန်းကြီးတွေမှာ မိုးလင်းမိုးချုပ် လှည့်ပတ်ကုသနေသူ ဆရာဝန်ကြီးတွေ စိတ်ကူးနဲ့တောင် မှန်းကြည့်ဖူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လောလောဆယ်မှာတော့ ဆေးဖိုးနေနေသာသာ ထမင်းတောင် စားစရာမရှိပဲ ဆေးရုံပေါ်မသေမရှင် ဖုတ်ကနဲရောက်ရောက်လာတဲ့ လူနာတွေ ကုရပါများလို့ မဟာရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးက မဟာ့မဟာဆေးကုခန်းကြီးတွေမှာ စူပါ့စူပါဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ ငွေသိန်းရာထောင်ချီကုသရင်း ရေတိမ်နစ်ရရှာတယ်ဆိုတဲ့ လူနာတွေကို ဒီကနေလှမ်းပြီး စာနာသနားရမှာ အားနာစရာကြီးများ ဖြစ်နေမလားလို့။ ခက်တာက ကိုယ့်မိတ်ဆွေရင်းချာများရဲ့ မိဘဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းမစာလို့တော့ ရပါ့မလား။ ကိုယ့်မှာလည်း အဖေအမေနဲ့ပဲဥစ္စာ။ ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ထဲသဘောပေါက်လိုက်မိတာကတော့ လူ့ဘုံလူ့ရွာမှာလည်း လူစဉ်မမီ လူတန်းမစေ့တဲ့သူတွေ တော်တော် များပေသကိုးလို့။ (ကိုယ်တောင် ပါသေး)။
` မိတ်ဆွေမိသားစုကတော့ ငွေရေးကြေးရေး အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့ ပညာတတ် လူချမ်းသာ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ သို့သော်လည်း သူတို့ခမျာ အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဆိုသလို မိအိုဖအိုများ ကျန်းမာရေးဒုက္ခကို ခံစားရတဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးဆေးခန်းကြီးတွေမှာ ကောင်းနိုးရာရာ သမားတော်ကြီးများနဲ့ အသီးသီး ကုသမှုခံယူကြပါတယ်။ သို့သော် မျှော်လင့်ထားတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေနဲ့တော့ မနီးစပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ရလဒ်မျိုးလည်း မရခဲ့ပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့အချိန်မှာ ရှေ့ဆက်ပြီး မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တာတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ ရွှေပြည်အေးတရားကိုချည့် တွင်တွင် ဟောခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ မရတော့ဘူးဗျ။ ပြဿနာက ဂျာနယ်ပေါ်မှာ ကိုရိးယားဇာတ်လမ်းတွဲများလို စီးရီးလိုက်ပွင့်ထွက်လာတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လက်စလိုက်သတ်ရဦးတော့မှာပဲ။
ညောင်ပင်တစ္ဆေ ဝေလေလေ လို့ ရေးခဲ့စဉ်ကတည်းက အပြင်ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းရုံနဲ့ အစိုးရပြည်သူ့ဆေးရုံ ဘာတွေ ဘယ်လိုကွာသလဲ သေသေချာချာ ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ မဖတ်လိုက်ရသေးတာမို့ ပြန်ပြောပြရဦးမယ်ဆိုရင် အပြင်ဆေးခန်းမှာ လူနာကို အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ယောက်ကပဲ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ကုသပေးတာဖြစ်ပြီး သူကတဆင့် လိုအပ်တယ်ထင်မှ တခြားသူနဲ့ နီးစပ်ရာဆရာဝန်ကြီးတစ်ယောက်ယောက်ကို ညွှန်းဆိုစာနဲ့ ပြသပေးရပါတယ်။ သူ့ညွှန်ကြားမှုအောက်မှာ လူနာကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ ဆရာဝန်၊ သူနာပြုလေးတွေ ရှိပေမယ့်လည်း တာဝန် နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပိုင်းမှာ ဘာတစ်ခုမှ စိတ်ချလက်ချလွှဲအပ်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်တစုံတရာမရပဲ လူနာအတွက် အသက်ကယ်တဲ့ကုသမှုမျိုး ၀င်လုပ်ပေးတာမျိုးတောင်မှ မျက်နှာကောင်းမရပဲ လူ့ရှေ့သူ့ရှေ့ နှစ်ပြားမတန်အောင် အပြောအဆိုခံရတတ်တယ်ဆိုတာ အပြင်ဆေးခန်းမှာ Medical Officer လုပ်ဖူးသူတိုင်း မြည်းစမ်းဖူးကြပါတယ်။
အထူးကုဆရာဝန်အချင်းချင်းဆိုရင်တော့ လူနာလုပြီး ၀င်ကုတယ်ဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းကိုပါ ထိခိုက်ပြောဆိုခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မမျှော်လင့်ပဲ လူနာတစုံတရာ အသည်းအသန်ဖြစ်လာလို့ အရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာ တာဝန်ကျဆရာဝန်ကလေးများအနေနဲ့ အင်မတန်မှပဲ ဘေးကျပ်နံကျပ် ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်လေးတွေဟာ အရမ်းလုပ်သက်နုပြီး ဘာတစ်ခုမှ မတတ်ဘူးဆိုတာကတော့ မှားပါတယ်။ အပြင်ဆေးခန်းပိုင်ရှင်များဟာ သူတို့ဆေးခန်းမှာ MO ခန့်ဖို့အတွက်ဆို နွားဝယ်တာ၊ ကားဝယ်တာထက်ကို စေ့စေ့စပ်စပ် အကဲခတ်စမ်းသပ်ပြီးမှ မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ခန့်ထားပါတယ်။ အဲဒီဆရာဝန်လေးတွေအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်ကတော့ ကုသရေးစွမ်းရည်မဟုတ်ပါဘူး။ အမိန့်နာခံမှု၊ ရိုကျိုးသွက်လက်မှု၊ လူနာနဲ့ သူ့အထူးကုဆရာဝန်အကြားမှာ နှုတ်စောင့်စည်းမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဦးနှောက်ထည့်ထားလို့ မရပါဘူး။ ဦးနှောက်က သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခံဆရာဝန်ဆီမှာပဲ ထားပါတယ်။
ဆရာဝန်လေးတွေက အဲသည်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ ခြေလက် မျက်စိ နား နေရာကပဲ ထားပါတယ်။ လျှာနေရာကတောင် မထားဘူးနော်။ လူနာအတွက်လိုအပ်လာရင် MO တွေက ၀င်လျှာရှည်ဖို့ စိတ်မကူးနဲ့။ သူ့လူနာကို သူ့ဆရာက သူ့ဘာသူရှင်းလိမ့်မယ်။ လူနာအတွက် သူအလုပ်ပေးနိုင်ဆုံး အလုပ်ဟာ ဆရာဝန်ကြီးကို မရအရ ဖုန်းခေါ်ပေးဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကို ဗျူရိုကရေစီယန္တရားနဲ့ စီမံကုသနေတာ မဟုတ်ပေမယ့် လူနာဘက်ကတောင်းဆိုလွန်းအားကြီးလို့ ဆရာဝန်ကြီးညွှန်ကြားချက်မရခင် ဒိုင်ယာဇီပန်ဆေးပြားကလေး တစ်ခြမ်းတိုက်ထားမိလို့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်လို လူနာရှေ့မှာ အပြောအဆိုခံရတဲ့အရသာကို ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးသွားပြီဆိုရင် နောက်တစ်ကြိမ် သူ့လူနာတွေကို ဟိုဆေးသည်ဆေးပေးဖို့ သတ္တိရှိနိုင်ဦးမှာလား။ တကယ်လည်း မရအရ ဖုန်းခေါ်ပေးတယ်။ သို့ပေမယ့် အဆက်အသွယ်မရဘူး။ ဒါဆိုရင်လည်း နောက်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကို ပထမဆရာဝန်သဘောမပါပဲ သူ့ဘာသူ ပြထားနှင့်လို့ မရပြန်ဘူး။ ဆေးခန်းအုပ်ချုပ်သူ တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရော ဘာဖြစ်လို့ ၀င်ပြီး မဖြေရှင်းပေးနိုင်သလဲဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲက ကုဋေကြွယ်သူဌေးကြီးပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ ပြန်ကိုးကားစရာ ရှိပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခရိုနီဆိုတာ နိုင်ငံတော်ဖြစ်သလို နိုင်ငံတော်ဟာလည်း ခရိုနီပါပဲ” တဲ့။
ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ ခရိုနီတွေရဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာ အဓိကရှယ်ယာပိုင်ရှင်တွေက နိုင်ငံတော်က လူကြီးတွေချည့်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ တော်တော်များများက ခရိုနီကြီးတွေ နံမယ်ခံရုံခံထားရတာလေ။ အထူးကုနဲ့ ဆေးခန်းပိုင်ရှင်တွေမှာလည်း သည်သဘောပဲပေါ့ဗျာ။ ဆေးခန်းရဲ့ အဓိကပိုင်ရှင်တွေက ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဖြစ်နေပြီး အုပ်ချုပ်သူက သူတို့လက်အောက်မှာ လခစားလုပ်ရတဲ့ ၀န်ထမ်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပြဿနာကို ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့တောင် မလိုတော့ဘူး။
ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ အခုလို ပြဿနာပေါ်ရတယ်ဆိုတာ တော်တော်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့ပင်စင်ယူပြီး အပြင်ဆေးခန်းလောကမှာ ကျင်လည်လာတဲ့လုပ်သက်ကိုက အခုကိုယ့်လုပ်သက်ထက်များပါတယ်။ (ကိုယ်အလုပ်ဝင်စမှာ သူပင်စင်ယူပြီးနေပြီ) နမော်နမဲ့ မေ့လျော့ပေါ့ဆမှုနဲ့ လူနာသေရတဲ့အစားမျိုးထဲက ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ဒါမျိုးဆိုတာ တစ်ရာခွဲလို့ တစ်ယောက် အဖိတ်အစင်ရှိရင်တောင် တင်ပြီးသားလူနာ ပြန်ဆင်းပြေးတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ အဲသလောက်တော်တဲ့ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ လူနာရေတိမ်နစ်ရရှာပါတယ်။ မမှားသောရှေ့နေ မသေသောဆေးသမား နဲ့ ကို ခွင့်လွှတ်လို့မရအောင် လူနာရှင်ဘက်မှာ ယူကြုံးမရဖြစ်ကြရတယ်။ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဖအေတစ်ယောက်လုံး ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘယ်သူ့မှ ခေါ်ပြလို့မရတဲ့ လူနာရှင်နေရာက စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
သူ့တစ်သက်မှာ လူနာသေဖူးတာ တစ်ယောက်တည်းရှိခဲ့လည်း အဲသည်တစ်ယောက်က ကိုယ့်အဖေဖြစ်နေမှတော့ ဖြေသာစရာလား။ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားကြည့်ရင် သမားနဲ့ လူနာနဲ့အကြားမှာ မကျေမလည် ရှိလာသခိုက် ကြားကနေ ပြေရာပြေကြောင်း ဖြန်ဖြေတာဝန်ယူပေးမယ့်သူ တစ်ယောက်မှ ရှိမနေတာကို သွားတွေ့ပါတယ်။
ပထမအချက်အနေနဲ့လူနာရဲ့ ရောဂါအခြေအနေ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုရဲ့သဘောသဘာဝ၊ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်တွေရဲ့သဘောကို လူနာရှင်ဘက်က သိမနေပါဘူး။ ဆီးထဲမှာ သွေးပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကြီးလို့ဖြစ်တာ။ ခွဲစရာစိတ်စရာမလိုဘူး။ မှန်ပြောင်းကြည့်ရင်း ခြစ်လိုက်ရင် ပျောက်သွားမှာ။ သူတို့သိတာ ဒါအကုန်ပဲ။ ဆီးကျိတ်ရောဂါဟာ အမျိုးသားတွေ အသက်အရွယ်တော်တော်ကြီးမှ ရတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီး အဲသည်အသက်အပိုင်းအခြားရောက်ရင် သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံးစတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးမျိုး တွဲမနေဘူးဆိုရင်တောင် လူနာရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေဟာ ဇရာကြောင့် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း သန်စွမ်းနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မေ့ဆေးထုံဆေးပေးတဲ့အခါမှာ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော လူနာ အတန်းအစားထဲထည့်ရပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က လူနာမှာ မခွဲစိတ်ခင်မှာ ဆီးထဲသွေးပါနေပါပြီ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာကတည်းက ပါနေမှန်း မသိပါဘူး။ အဲဒါက လူနာအတွက် အန္တရာယ် နှစ်ဆလောက်ပိုများသွားစေတဲ့အချက်ပါ။
တတိယအချက်က ဆီးကျိတ်ခြစ်တဲ့အခါမှာ မခွဲခင်ကထက် သွေးထွက်ပိုများတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ဆီးအိမ်ထဲမှာ သွေးခဲနဲ့ ပိတ်တတ်တဲ့အတွက် အပြင်ကနေ ရေတွေကို ပိုက်တစ်ချောင်းနဲ့ ဆီးအိမ်ထဲမှာ တစ်စက်စက်ကျနေအောင် သွင်းထားပေးရပါတယ်။ အဲသည်အတွက်လည်း လူနာမှာ အန္တရာယ်ထပ်ရှိပါတယ်။ အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ လူနာရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဟာ ဓါးသွားပေါ်တင်ထားတဲ့ မုန်ညင်းစေ့လောက်ကို ဘေးဖြစ်စေနိုင်သော သဘောရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း လူနာရှင်တွေဘက်က အဲဒါတွေကို မသိပါဘူး။ ခွဲခန်းထဲကို လမ်းလျှောက်ဝင်လာတာ မျက်စိထဲကမှ မထွက်သေးပဲ။
ဆရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ လူနာများစွာကြည့်ရှုကုသနေရတာကြောင့် ဘယ်လူနာကိုမှ အချိန်များများပေးပြီး စကားမပြောနိုင်ပါဘူး။ လူနာနဲ့တွေ့တဲ့ တဒင်္ဂကလေးအတွင်းမှာ သူ့အပေါ် ပစ်ခတ်ယုံကြည်အားကိုးချင်သွားအောင် ခင်မင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စိတ်ကလေးပေါ်လာအောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျွမ်းကျင်လာသော နည်းတွေနဲ့ ဂရုစိုက်ပြရပါသေးတယ်။ ဥပမာ မျက်လုံးချင်းတေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်၊ လက်ကလေးကိုကိုင်ထား၊ ကျောကလေးဖြစ်ဖြစ်သပ်ထား၊ ချိုချိုသာသာစကားလေးတွေ ရယ်ရယ်မောမော ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောထားပေး၊ အဲဒီတော့မှ လူနာက သူ့ကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့ ဝေဒနာတ၀က် သက်သာသွားတယ် လို့ ဖြစ်လာမှာကိုး။
“ခိုင်ခိုင်ကျော်မှာတောင် ထမင်းစားလို့ရတယ်” ဆိုတာ အဲသည်သဘောမျိုးပြောတဲ့စကားထက် မပိုပါဘူး။ သို့သော်လည်း သူ့လူနာမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို မျက်စိလျှမ်းသွားလိမ့်မယ် လို့တော့ မထင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တို့သဘာဝ ဘယ်အချိန်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာတတ်တယ် ဆိုတဲ့သဘောဟာ သူတို့ကသင်ပေးလို့ ကျွန်တော်တို့ တတ်လာခဲ့ရတာတွေ မဟုတ်လား။ သူ့ဘာသာသိသော်ငြား သူ့ဘာသာ သတိထားသော်ငြား လူနာရှင်တွေကို စိတ်မပူစေချင်လို့ မပြောမိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူနာရှင်တွေဘက်မှာလည်း အခြေအနေမှန်ကို သိထားဖို့လိုပြန်တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါကို ဘယ်သူက ပြောပေးမှာလဲ။ အဲဒီသော့ချက် ကြားခံ Buffer ဆိုတာ အခုပြဿနာရဲ့ အဖြေပါပဲ။
ဆေးခန်းကဆရာဝန်ကလေးတွေအနေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်စကား ကျွံနေတယ်ဆိုတာထက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ် မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ဘာတွေဖြစ်လာလာ ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိဆုံးက ကိုယ်တွေပဲ မဟုတ်လား။ “စိုးရိမ်ရတယ်နော်” ဆိုတဲ့ မပြောမဖြစ် စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် ဆရာကြီးလာတဲ့အခါ “သူ ဘာမှလည်း မတတ်ပဲနဲ့” ဖြစ်သွားပြီးပြီ။ အဲသည်အချိန်မှာ မိသားစုနဲ့ထပ်တူ စိုးရိမ်ပူပန်နေရတဲ့ တခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို ပြပါဆိုရင် အဲဒီဆရာဝန်ကိုပဲ ပြရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ လူနာရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်မှာ သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကို ပူးချည်ထားတာကိုး။ သူ့ခမျာ ပြောချင်တာတွေလည်း အများကြီးနေမှာ။ သို့သော် ဘာတစ်ခွန်းမှ ပြောရဲမယ်တော့ မဟုတ်ဘူး။
ပဲလှော်ကြား ဆားညပ်တယ် ဆိုတာ သူမှ အစစ်။ တကယ်တမ်းအဲသည်အချိန်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာ လူနာရှင်ဘက်က ဆွေမျိုးသားချင်း ဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်ပါ။ ဆေးကုသပေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြေအနေကို ၀င်ရောက်ဆွေးနွေး မေးမြန်းပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေလုပ်ထားတယ်။ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို လူနာရှင်တွေဘက်ကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အကြံပေးနိုင်ဖို့ အသည်းအသန် လိုအပ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲသည်မိသားစုမှာ ကိုယ်နဲ့သိထားတာတင် ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ပြည်ပမှာရောက်နေတာပါ။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကို မိသားစုအနေနဲ့ အဲသည်အချိန်ကရော အခုချိန်မှာပါ လိုအပ်နေပါတယ်။ ကျန်ရစ်သူတွေကို နှစ်သိမ့်ပေးဖို့အတွက်ပါ။ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားပေးဖို့အတွက်ပါ။
အပြင်လူတွေ နားလည်ရခက်ခဲပြီး ဆရာဝန်အချင်းချင်းသာ စာနာနိုင်တဲ့ သေမင်းနဲ့စစ်ခင်းရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို စိတ်အေးလက်အေး ရှင်းပြပေးနိုင်ဖို့ပါ။ ဖြစ်လာခဲ့တိုင်း ဆရာဝန်တွေဘက်က ပင်းဖို့ ကာကွယ်ဖို့ထက် သောကပရိဒေ၀မီးတောက်လောင်နေတဲ့ မိသားစုကို စိတ်ဖြေရာပေးနိုင်ဖို့ အဓိကပါ။
လူတိုင်းမကင်းနိုင်တဲ့သဘောကြောင့်မို့ နာဖျားမကျန်း အိုမင်းရခြင်းသဘောတွေဟာ ထပ်၍ထပ်၍ တွေ့ကြုံရဦးမယ့် ဓမ္မတာရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် နေထိုင်မကောင်းရှိလာခဲ့ရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တော့မှ မကုတော့ဘူး လို့ ပိုက်ဆံအထုပ်လိုက် ပြင်ထားလို့လည်း မပြီးပါဘူး။ အဲလိုဆိုရင် စင်္ကာပူမှာ သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာ အကုန်ခံ၊ အကြိမ်ကြိမ်ခွဲစိတ်ကုသပြီးတာတောင် မသေလောက်တဲ့ရောဂါ၊ ပျောက်လည်း မပျောက်၊ မသေမရှင်ဖြစ်နေတာမို့ လေယာဉ်စင်းလုံးငှားပြီး မြန်မာပြည်ပြန်သယ်လာရတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုနဲ့ တွေ့ပေးချင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိခံစားနေရတဲ့ အဲသလောက်ကုန်ကျထားတာတောင် သည်လောက်ပဲ ဂရုမစိုက် ပစ်ထားကြရသလားဆိုတာထက် မလျော့တဲ့ နာကျည်းမှုတွေ ခါးသည်းမှုတွေ အပြည့်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တုန်းကမှ ဇာတ်နာအောင် ဖတ်ကောင်းအောင် ဆင် မရေးခဲ့ပါဘူး။ အများကြီးကို လျှော့ရေးထားတာပါ။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာပြည်က အထူးကုဆေးခန်းကြီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဟာ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ဆိုရင် ဘယ်လိုပဲတွေးတွေး အောက်ကျနောက်ကျရှိနေမှာ မလွဲပါဘူး။ သို့သော်လည်း တောကြိုအုံကြားက ကျွန်တော်တို့လို ဘာအထောက်အကူမှ မရှိပဲ ရမ်းရမ်းကားကား ကုနေတဲ့ဆရာဝန်တွေလက်မှာလည်း မသေချင်တဲ့သူက တော်တော်ကို အသက်ပြင်းတာပါ။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သေခြင်းရှင်ခြင်း အကြောင်းတရားဟာ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ရဲ့ လက်ဖျားပေါ်မှာ တင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူကသာ သူ့ဘာသာ ငါကယ်လို့ ရှင်သွားတာ လို့ တွက်ချင်တွက်မယ်။ (ငါလုပ်လို့ သေသွားတယ်လို့တော့ ဘယ်တွက်ပါ့မလဲ) ကံအကြောင်းတရားလို့သာ သဘောထားရမှာပါ။
သို့သော် အဲသည်လို ကံအကြောင်းတရား လို့ လက်ခံလာနိုင်ဖို့အတွက်တော့ ဆရာဝန်ဘက်က နှစ်သိမ့်မှုပေးဖို့လိုပါသေးတယ်။ ပဲကြီးလှော် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သိကြားမင်းကြီး ပဲလှော်ဖိုထောင်ရင်တောင် “သူ့ချည့်သာလော” လို့ မေးရင် “ဆားနှင့်ပါ ဘုရား” လို့ပဲ ဖြေရပါမယ်။ ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဘယ်လောက်တော်တော် ကြားကနေ ဖြန်ဖြေနှစ်သိမ့် ရှင်းပြပေးရမယ့် ကြားခံဆရာဝန်ကလေးတွေရဲ့ ပါးရည်နပ်ရည်ရှိမှုမပါရင် အခုလိုပဲ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ကလေးတွေကို ပြည်ပန်းညို ချိုချင်ပါလျက် ဆားကဖျက်တယ် လို့ မမြင်ပဲ သင်တိုင်းတတ်၊ စပ်တိုင်းဟန်၊ ခပ်တိုင်းငံတဲ့ ပဲခူးဆားကလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် လူရေးလူရာကလေးသွင်းပြီး လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးစေလိုပါတယ်။
ဆရာဝန်လေးတွေလည်း ပဲလှော်ကြား ဆားညပ်ရတဲ့ ဒုက္ခက ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
မူရင်း – http://www.facebook.com/SoeMin
One Response to ပဲလှော်ကြားကဆား – medical doctors in Burma
Saya Hman Gyee on August 23, 2012 at 8:06 pm
This article is universal truth. Many of the patients died,because of wrong diagnose,and mistreatment in Burma.The rich persons also died in the famous Clinics like hospitals,by wrong decisions made by famous Greedy Doctors,and the poor people also died in the Government hospitals,which are lack of medicines and instruments. POOR people of Burma.Many many events happened in Burma,nowadays.